Akhri Qisadan ka dib dareenkaaga muuji | YoobsanNews.com
Akhri Qisadan ka dib dareenkaaga muuji
Gabar ayaa ifka waxay la nooleed hooyadeed oo kaliye, gabadhii waa weynaatay/kortay waxeyna u baahatay in ay mustaqbal sameysato oo ay guursato.
Wey guursatay waxeyna guursatay wiil ina adeerkeed ah, gabadhu waxay rajeynesaa in nolosheedii hore wax weyn iska badalaan oo ay noqoto mid reer leh hooyadeedna wax tari karta.
Nasiib darro gabadhii waxey kala kulantay reerkii ninkeeda wax eysan ka filayn, waxaa loola dhaqmay si arxan darro ah waxaa loola dhaqmay sida inaysan ka tirsaneen reerka,howshii ayaa lagu cadaadiyay habeen iyo maalin, kaaga sii darane caay aflagaaddo iyo garaac ayaa looga sii daray.
Waxay u timid hooyadeed, wexeyna ku tiri hooyo dhibaatadaas ayaa i heysata, hooyadii oo aan awood saasa lahayn ayaa gabadheeda kula talisay in ay iska sabirto culaysakanna uu fudeyd ka dambeyn doono.
Gabadhii waxay ku laabatay reerkeedii waxayna halkaa ka sii wadatay noloshii madoobeyd, waa gabar yar ma heysato qiimihii marwo lahayd,ma haysato farxaddii,mahaysato cid daneysa sidoo kale ninkeedana aad ayey u jeceshahay loomana oga tixgalin gaar ahn malahan
Waxaa ku batay dhibaatada ey ku hayaan ehelka ninkeeda.
Isbuucii labaad hooyadeed ayey u timid ayadoo u cabaneysa una sheegeysa waxa lagu hayo oo arxan darrada ah, hooyo wax kale ma awooddo lkn waxay la qeybsatay xanuunka oo wey la oysaa, wey laabataa gabadhii ayadoo xoogaa oohinta hooyadeed niyadda ku dhisaneyso dareemeysana sidey hooyo ula qeybsaneyso xanuunka.
Noloshaas aadka u qallafsan wexey ku noolayd muddo 10sano ( toban sano) ah,
Sida caadada ahayd gabadhii markay hesho jaanis/fursad yar wexey u imaanjirtay hooyadeed oo isla walaaci/ooyi jireen dhibaatada gabadha lagu hayo daraadeed.
HOOYOADII wey xanuun satay oo xanuunkii geerida ayaa haleelay.
Gabadhii ayaa aad u oysay oo ay cidladu ku soo weynaatay, wexeyna si caloolxuma ah ku tiri ” Hooyo hadii aa iga dhimatid yaa xanuunka ila qaybsanaya ina dhiirra galinaya?”
Hooyo ayaa ku tiri ” gabadheyda mar Allaala markaa dareented dhibaato halkan imow oo gurigeyga ah soona weyseyso Rabbigaa u sujuud oo ashtakadaada/Cabashadaada u sheego,”
Hooyadii wey dhimatay.
Dhibaatadi gabadha waxba iskama badalin oo sidii ayaa loo dhibayaa,
Gabdhi wexey qaadatay dardaarankii hooyadeed, week ka dib wexey aaddaa goobtii hooyadeed ku geeriyootay ayadoo wadata caag/weel biyo ku jiraan,
Halkaas ayey ku weyseysataa ku sujuudaa Allane ku baridaa.
Guriga ninkeeda ayey ka soo baxdaa iyadoo murugeysan markey Alle soo barido ayey ku soo laabataa iyadoo faraxsan niyaddeedana Alle u qaboojiyay
Maalin maalmaha ka mid ah ayaa reerkii habaarka qabay ee gabdhu xididka u ahaa ayaa wxey ku yiraahdeen wiilka” war islaantan wey ku dhagreysaa waxba ma ogid sababtoo ah marwalba wxey aadaa gurigaas waliba ayadoo murugeysan hadana wadato/sidata weel biyo ku jiran wexeyna soo laabataa iyadoo faraxsan weelkii biyahana faaruq yahay”
Wiilkii wuu shakiyay go’aan ayuuna qaatay.
Maalinkii xigay wuu ka hormaray gurigii ayuu galay meel eysan ka arkeyn ayuu fadhiistay lkn isagu uu arkayo doonayana in uu arko waxa ay sameyneyso.
Gabadhii ayaa soo gashay gurigii iyadoo geerida hooyadeed laga joogo muddo bil ah, sidii caadada u ahayd ayey bilowda wey weyso qadaty weytukatay ilaahay ayey bariday iyadoo ooyeysa oo leh” ilaahayow adiga mooyee cidkale oo dhibaatadan iga bixin kara majiro, rabbiyo culeyskan iga qaad ninkeygana iisoo hanuuni aad ayaan jeclahaye.
Ninkii wuu maqlayay inta ay ooyeysay isna wuu la ooynayay, markey dhameysatay salaadeeda ayuu ku soo baxay isagoo indhahiisu ilmada ka dhamaatay jilbaheeda ayuu jilbaha saaray gacmahiisana ku qabtay labadeeda dhaban kuna yiri”
Bishaareyso Rabbi ducadaada wuu aqbalay waxana ballan kaaga qaaday in aan kugu celin doonin gurigaas saakay laga billaabo iriddaas naga bixi” gabdhii halkaas ayey ku heshay noloshii ey toban sano raadineysay ee ay u sabreysay.
Yaa Allaah,! toban sano ayeey ehel qofka ugu dhawaa cabashadeeda u sheeganeysay waxna uma eysan tarin.
Maalmo yar ayey Allah u cabatay arimaheedana wax ka badalay.
Previous: Golaha Wasiirrada oo ansixiyay xeerka siyaasada dhalinyarada Qaranka
Next: Daawo Maalinta xanuunka kaadi-macaanka oo Muqdisho laga xusay